Iyo yazvino vhezheni yeUbuntu inokuvadza Lenovo uye Acer makomputa | Linux Vakapindwa muropa
Kupera kwa2017 hakuna kuve kwakanakira timu yeUbuntu uye kugoverwa kweCanonical mune zvese. Kunyangwe hazvo Canonical iri nhanho imwe padhuze neIPO, kugoverwa kwayo kuri kuwedzera kure nemakomputa epamba.
Munguva pfupi yapfuura chikanganiso chakaonekwa mukati meUbuntu 17.10 chinoita kuti iyo BIOS yemamwe Lenovo neAcer makomputa isashande uye mune dzimwe nguva kunge chidhinha chaicho. Bug rinoramba risina kugadziriswa uye rakatokonzeresa Ubuntu bvisa iyo Ubuntu 17.10 ISO mufananidzo.
Chirevo chebug chakatumirwa pakupera kwaNovember, asi mazuva mashoma chete gare gare apo timu yeUbuntu yakaziva mamiriro ezvinhu ndokutanga kushanda naLenovo kutsvaga mhinduro. Yakakurumidza kuwanikwa dambudziko rakakonzera iyi bug, sezviri pachena ine chekuita nekuparadzira kernel. Saka vakomana veUbuntu vakagadzirisa iyo kernel yekuparadzira, asi zvinhu zvisati zvagadziriswa.
Ubuntu inokurudzira kuisa Ubuntu 16.04.3 uye kwete Ubuntu 17.10
Kune rimwe divi, kusvikira nhasi, iyo Ubuntu download webhusaiti zvakadaro usiri kuratidza iyo Ubuntu 17.10 ISO kurodha pasi, inokurudzira Ubuntu 16.04.3; kune rimwe divi, mu Launchpad, zvinonzi kuvandudza kernel inogadzirisa matambudziko eBIOS, asi Lenovo anoti makomputa akanganisa haana mhinduro.
Kana iwe uri mumwe weavo vashandisi vanokanganiswa neiyi bug, pane maviri epamutemo mhinduro. Chero isu tinoshandura iyo mamaboard yekombuta uye nekuisa yazvino BIOS inogadziridza iyo komputa uyezve woisa Ubuntu kana imwe Gnu / Linux kugovera; kana, kana isu tiri vashandisi vehunyanzvi, Isu tinoenda pasi pevhu uye tinoshandisa maturusi ayo anobatsira kumutsidzira iyo BIOS uye nekuisa yazvino yekuchengetedza chigamba chakaburitswa naLenovo. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Ubuntu neLenovo vanoshambidza maoko evashandisi vakakanganiswa, vachisiya mhinduro kwavari. Zvirinani izvozvi…
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Dzazvino Ubuntu vhezheni inokuvadza Lenovo uye Acer makomputa
Lenovo zvakare, gore rapfuura yaive iyo Lenovo Yoga iyo yaisatendera kuisa GNU / Linux kana chero zvemukati zvemukati.
Haisi lenovo chete, mune asus gl chimwe chinhu chandaive ndisina kundisiira chero kugoverwa kunoenderana nedebian yandakaedza, asi zvichibva pane arch kana, uye ne hp yandinayo izvozvi zvinopa matambudziko pakuisa uye kana kuichinja kubva pairi yakaturikwa uye ndinofanira kuchengeta bhatani remagetsi, asi unogona.
Ndakaverenga kuti icho chinhu chine chekuita neNVMe, uye zvakangoitikawo, iwo malaptop maviri ane m.2 slot
Machon sudaca akadaro
Mune fungidziro dambudziko iri harifanirwe kukanganisa Mint sezvo yekupedzisira yakagovaniswa kugovera (SYLVIA) inoshanda neiyo 16.04 kernel asi ndinoshamisika kuti chii chichaitika neinotevera kana ivo vakaisa paUbuntu 17.10?
Pindura Macachon sudaca
Linux Mint inoenderana chete neshanduro dzeLTS. Inotevera ichave yakavakirwa paUbuntu 18.04
Kana Hardware ichigona "kutsemurwa" nesoftware, zvinoreva kuti Hardware yakagadzirirwa zvakashata uye haienderane.
Zvakaitika kwandiri pane hp ine i5 yechina chizvarwa uye ndaive ne gt840 mushure mekuisa Ubuntu 16.04 gnome mune yangu, ndaida kuisa Windows kuti ndiitengese uye ini handina kukwanisa. Iyo BIOS yakadonha, haina kunditendera kubhowa kana chero chinhu. Ndakairasa, ndakashaya mhinduro.
Iyo inogara iri ubuntu, muchidimbu pane manjaro, debian, fedora, inovhura zvandinoda, centos nezvimwe ... Ini kubva pane zvangu ruzivo ndakaita zvirinani nekugovera kunoenderana ne rpm mapakeji uye, neyekutanga madhiri mapakeji ayo ari debian.
Ini ndinofunga dambudziko harisi neUbuntu 17.10 asi neKernel iyo yainotakura, ini ndinoshandisa Linux Mint (iyo yakavakirwa paUbuntu 16.04.3) uye mushure mekuvandudza iyo Kernel iyo BIOS yakakuvara ... Saka izvo zvandinofanira kuita aiwa usambo gadziridza kune kernel 4.13 uye usaise chero kukanganisa kunoitakura.
HONDO yeOS, iyo yakabhadharwa uye iyo Open Source, iyo yakabhadharwa $ vava kubuda paruoko, hapasisina purofiti yakakura, zvapera, bubble raputika, ko chii chavakaita nemari yakawanda kudaro? Ramangwana riri kuenda ipapo, vanofanirwa kushanda pamwe chete, zvakafanana nezvakaitika nedambudziko rekuchinja, dambudziko rakafanana, mhinduro imwechete. Mhedzisiro: Monsanto yaifanira kutengeswa kune anokwikwidza Bayer, Zvakafanana zvichaitika neOS, hove hombe inodya idiki, dzakakuvadzwa: vatengi, vanhu vanofamba netsoka, isu tinongofanirwa kutora bhokisi kuti tione kusvika kwazvichasvika. , utsanana uye hunhu: hapana, 0.
Kana ndangariro ikasakundikana, ino inguva yekutanga kuti chimwe chinhu cheichi chidimbu chiitike. Chaizvoizvo muchibvumirana naManuel Nervión, ye software yekupisa iyo BIOS firmware ndeyekuti iyo vhezheni yeKernel yakapihwa naUbuntu yaive nezvikanganiso zvakakomba. Mukuita, hapana chinhu: kuna Lenovo zviri pachena kuti hazvikurudzire kana kukurudzira GNU / Linux (hapana chimwe chiratidzo chinoitisa), kana Ubuntu (kana kumwe kugovera kana kunyorera) kuchave nekonzeresa kukuvara kwemidziyo kana iri nyaya yacho kuiswa kwayo.
Ndidzo njodzi dzatinomhanya nadzo. Ndinoonga vamwari kuti ini handina kana dambudziko neASUS yangu. Ini ndakanaka kwazvo. Ndine hurombo kune avo vakanganiswa.
Kwidziridzo: dambudziko rinobatawo akati wandei vhezheni yeToshiba Satellite uye Dell Inspiron, zvinoitawo sekunge yakabatana neIntel machipisi, hapana marekodhi kusvika parizvino zvine chekuita ne AMD.
Pane chero munhu anoziva kana Ubuntu 18.04 iine matambudziko akafanana?